FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA CARLIN PINSCHER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Carlin Pinscher
Mango amin'ny 2 taona
Araka ny American Canine Hybrid Club, ny Miniature Pinscher sy ny lakroa Pug dia antsoina hoe Muggin. DBI dia nianatra foko hafa heverina fa hitondra anjara biriky amin'ny karazan'i Carlin Pinscher, ary ampidirina amin'ny valan-javaboary Carlin Pinscher amin'ny fikasana hamorona karazana vaovao. Noho izany, nosarahinay ny Carlin Pinscher sy ny Muggin. Ny anarana hoe 'Muggin' dia antsoin'ny American Canine Hybrid Club hoe lakroa Pug / Min Pin. Raha te hampiasa ny iray amin'ireo alika ireo ianao ary manana safidinao amin'ny karazana tianao, alohan'ny hananganana azy dia anontanio ny mpiompy izay alika karazany ampiakarin'izy ireo, ny Muggin na ny Carlin Pinscher.
Ho an'ny karazany iray mivoatra, ny Carlin Pinschers dia mitovy endrika amin'ny endriny. Ny Carlin Pinscher dia tsy manana olana ara-pisefoana noho ny fananana ny sasany amin'ny vongan'ny Miniature Pinscher. Ny Pug dia nanome azy tongotra matevina kokoa sy vatana matanjaka matanjaka kokoa. Ny palitao dia mitovy amin'ilay akanjo fohy kokoa, izay saika tsy mandatsaka ny Pinscher kely . Ny loko izay itomboany dia mainty sy mainty.
Araka ny voalazan'i Isabeau, iray amin'ireo mpamolavola an'i Carlin Pinscher tany am-boalohany, 'Manam-paharetana izy ireo ary mahafinaritra toy ny a Pug , 'na dia mbola mitazona ny sasany aza izy ireo, saingy tsy izy rehetra Pinscher kely fihetsika toy ny terery. Ity dia karazan'olom-bolo mihintsy, mampiseho fitoniana, filalaovana, hatsarana lehibe, fahamendrehana ary toetra tia sy tia. Ny ankamaroan'ny alika kely dia notezaina tamina ankizy manaja izay mahay mampiseho ny fitarihana ny alika, lasa alika manaja sy malefaka. Ilaina amin'ny alika rehetra ny fampiofanana amin'ny fankatoavana sy ny mpitarika entana mafy orina, satria ny alika ratsy fitondran-tena dia mety handratra zaza noho ny tsy fahaiza-mitarika. Alao antoka fa mafy orina ianao, azo antoka, tsy miovaova ity alika ity mpitarika fonosana hialana Syndrome kely alika , entanin'ny olombelona olan'ny fitondran-tena . Tadidio foana, alika dia alika canines fa tsy olombelona . Aza hadino ny mahita ny voajanahary voajanahary ho biby.
Hahavony: 11 - 13 santimetatra (28 - 33 cm)
Lanja: 12 - 14 pounds (5 - 6 kg)
lehibe sy ny sisin-Pyrénées collie
Ny Carlin Pinscher dia tsara amin'ny fiainana an-trano. Mavitrika be izy io ao an-trano ary hanao tsara raha tsy misy tokotany. Ny Carlin Pinscher dia tokony harovana amin'ny hatsiaka.
Ireo alika ireo dia tsy mila fanatanjahan-tena be loatra fa tokony nandeha isan'andro hanatanterahana ny fahatsapan'izy ireo ny kanelina primal mba handeha. Ho fanampin'izay dia tokony homena fotoana mahazatra mihazakazaka sy milalao izy ireo. Hamarino tsara fa ny tokotanin-tsambo ahafahan'izy ireo mihazakazaka malalaka dia misy fefy avo ampy hisorohana ny fiezahana tapa-kevitra handositra sy hizaha.
inona ny alika puggle
Ny palitao malefaka sy fohy volo ary mafy an'ny Carlin Pinscher dia mora karakaraina. Afangaroy sy borosy amin'ny borosy mafy volo, ary shampoo raha tsy ilaina. Ny volo malalaka dia afaka esorina amin'ny famafana lamba famaohana mafana sy mando. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Antsoina hoe Pug-Pin tamin'ny voalohany izy io, ary nanomboka teo anelanelan'ny Pinscher kely ary ny Pug . Ireo karazana hafa heverina fa hitondra anjara amin'ny karazan'i Carlin Pinscher dia efa, ary ampidirina ao amin'ny dobo filokana koa. Ny anarana Carlin dia avy amin'ny Pug, toy ny any amin'ny firenena sasany, ny Pug dia fantatra amin'ny hoe Carlin. Tapaka tamin'ny 1998 fa hamorona karazana vaovao. Ny hevitra dia avy amin'ny namana telo an'i Grant Milionta's. Ny anaran'izy ireo dia Isabeau Morgan, Katushka Vitrichenko ary Kawika Buenafe. Nandritra ny 1992 tany Frantsa, Isabeau sy Katushka dia nahita alika izay nitovy tamin'ny Rottweiler kely. Nilaza tamin'izy ireo ny tompon-trano fa hazo fijalian'i Pugs sy English Toy Terriers izy ireo. Tany Honolulu dia nahita alika mitovy amin'ny kilalao Rottweiler koa i Kawika. Nilaza tamin'ny tompony i Kawika fa ny alika dia hazo fijalian'ny Miniature Pinscher sy Pug. Fotoana kely taty aoriana rehefa nanao fialan-tsasatra i Kawika sy Isabeau, dia navelan'izy ireo ny alikalahin'izy ireo Miniature Pinscher izay niara-niasa tamina tompon'ny Pug mainty iray. Rehefa niverina avy namonjy ny fialan-tsasatra izy ireo dia nahita fa ny alik'izy ireo dia namoaka ilay Pug mainty tsy nahy. Teraka kely telo no teraka, mitovy amin'ny Rottweilers kely rehetra. Namboarina daholo izy telo ary lasa tany Grant Milionta ny iray. Ny alikan'i Grant dia Snooz no anarany. Betsaka ny olona maniry alika toa an'i Snooz ary nisy aza nanandrana nangalatra azy. Taorian'ny fikarohana sy drafitra be dia be, dia nanapa-kevitra i Grant fa hamorona karazana vaovao mifototra amin'i Snooz, miaraka amin'ny fanampian'i Isabeau, Katushka, ary Kawika. Tapaka fa ny Miniature Pinscher mena nampiasaina Snooz dia tokony hampiasaina ary hambolena amin'ny Pugs mainty. Vehivavy Pugs no nampiasaina satria fanaon'izy ireo ny manana alika kely. Amin'ny fampiasana ireo alika ireo, ny alika kely rehetra teraka dia nanana palitao mainty sy mainty, izay mainty mafy orina no manjaka. Androany ny Carlin Pinscher dia nokolokoloina tamim-pitandremana ireo toetra voafantina tamin'ny alàlan'ny klioban'ny karazan'olona taloha izay misy an'i Grant, Isabeau (izay mbola miasa miaraka amin'ireo Miniature Pinschers), Katushka ary Kawika (izay mbola miasa miaraka amin'ireo Miniature Pinschers sy Greyhound adoption). Ny Carlin Pinscher dia tsy alika tsy madio. Ny alika madio dia iray izay manana tantaram-pirazanana voarakitra an-tsoratra - nantsoina hoe tetirazana - taranaka maro dia maro mitovy karazana aminy. Amin'izao fotoana izao ny ankamaroan'ny Carlins dia manana andiany iray na roa amin'ny rakitra. Ato ho ato dia ampiharina amin'ny klioba isan-karazany i Carlin Pinscher amin'ny maha-karazany mandroso azy.
Snooz ity. Sary natolotry ny Homepage Carlin Pinscher
Snooz, sary nahazoana lalana avy tamin'ny Homepage Carlin Pinscher
Fako alika kely an'ny Carlin Pinscher
Hijery ohatra misimisy momba ny Carlin Pinscher
Sarin'i Carlin Pinscher 1
mpiandry alemà malefaka collie mix
mainty laboratoara sy terrier Mix
sarin'i Dane Pitbull mix
sarin'i shih tzu poodle mix